Philips Momentum 278M1R, falanqayn qoto dheer | Wararka Gadget
Iyada oo la horumarinayo isgaarsiinta, adduunka qulqulka iyo gaar ahaan ciyaaraha, soo -saareyaasha kormeerayaasha ayaa soo bandhigaya beddello xiiso leh oo sii kordhaya oo ka caawiya adeegsadayaasha sameynta qaab -dhismeed wanaagsan oo isku -dhafan oo naga caawiya inaan ka faa'iideysanno booska annaga oo aan lumin astaamaha habboon.
Tani Philips Momentum 278M1R wuxuu bixiyaa mid xiiso leh oo dhan-ka-mid ah oo leh ciyaaro gaar ah, xirfado iyo awoodo warbaahin badan. Nagala hel falanqaynta qoto-dheer ee kormeerahaas Philips ee isku-dhafka ah iyo waxa waayo-aragnimada guud ee adeeggu ahayd, waxaan ognahay inaadan doonayn inaad seegto, haddii aad raadineyso kormeere, waxaa laga yaabaa inaad ku dambayso midkan.
3 Isku xirnaanta iyo HDR
4 Khibrad dhawaaq iyo warbaahin badan
Tani Philips Momentum 278M1R waxay si toos ah uga cabtaa “walaalkeed weyn” 55-inji Philips Momentum, sidaa darteed waxay diiradda saareysaa inay soo bandhigto waayo -aragnimo isticmaale cajiib ah dhinacyo badan, midkoodna naqshadeeyo. Tayada dhismuhu aad bay u wanaagsan tahay, saxeex guud oo ka mid ah alaabooyinka Philips, ayaa haddana ka tanaasulaya naqshad nooca “ciyaarta” ah ee gardarada ah, wax la mahadiyo inay sidoo kale awood u yeelan karto inay dhigto waxa noqon doona daraasad ama xarun shaqo. Naqshaddu waa mid la safeeyey oo xarrago leh, oo astaanteeda ku qarineysa maqaar dhab ah.
Ma jeceshahay naqshadiisa? Amazon waa qiimaha ugu fiican oo leh 24-saac oo dhoofinta gebi ahaanba bilaash ah.
Labadooda sare iyo dhinacyada waxaa "la yareeyey" qiyaastii sideed milimitir, wax walba waxay u hadhaan qeybta hoose. Iftiinka korontada LED -ka ee dhinaca midigta hoose iyo Ambiglow ee ku xeeran xagga dambe ee aaladda, halkaas oo isku xirnaanta iyo tiirka taageeradooduba ay yihiin. Tiirkani wuxuu leeyahay nidaam rakibid “gujin” ah oo fudud, sida caadiga ah kiiska alaabtan Philips ee badhtamaha / dhammaadka ah, waana wax aan aad u qadarinno, inaan awoodno inaan sameyno dhammaan noocyada kala duwan ee qalabyada shirka ugu horreeya.
Heerka naqshadeynta, tan Philips Momentum 278M1R Waxay u taagan tahay tayada dhismaha, naqshad warshadeed oo aad u qurux badan oo soo jiidasho leh iyo Laydhka dambe ee cajiibka ah.
Waxaan ka bilownaa guddi 27 inji oo leh qaraarka 4K UHD ee 3840 x 2160 pixels leh xiriir dhinaca dhaqanka ee 16: 9 iyo la jaanqaadka HDR. Qaraarkani wuxuu na siinayaa cufnaanta pixel of 163 DPI iyo dhibic pixel oo kaliya 0,155 x 0,155 millimitir, wax maanka lagu hayo. Weelka ugu horreeya ee biyaha qabow ayaan ku qaadnaa koobka soodhaha iyo cusboonaysiinta guddi, oo ku xardhan 60 Hz.
Waxaan leenahay a xiiso leh 350 cd / m2 LED backlight, maadaama sida muuqata ay tahay, waxaan ka shaqeynaa guddi IPS LCD ah. Waxaan leenahay 1000: 1 isbarbardhig taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan wada raaxaysanno 91% ee kala duwan ee NTSC, 105% ee sRGB, iyo 89% heerka Adobe RGB, markaa waxaan u tixgelin karnaa inay ku habboon tahay tafatirka sawirrada ku saleysan imtixaannadayada. Waa run midabka, waxaanan aad ugu sii dhawaannay heerkulka midabka ku habboon ee 6500K kaas oo keenaya muuqaal cad oo dabiici ah, marka laga reebo casaanka, halkaas oo kormeerayaasha Philips ay u muuqdaan inay dhergaan. Haddii kale waxaan leenahay midab isku mid ah oo umuuqda mid dabiici ah oo lagu farxo in la shaqeeyo iyo in la ciyaaro labadaba. Waxaad ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican Amazon, ha seegin fursadan.
Isku xirnaanta iyo HDR
Tani Philips Momentum 278M1R ku dhawaad ​​waxba ma lahan, markaa aan ku bilowno waxa Waxaan isla markiiba seegay xiriirkii USB-C. In kasta oo ay run tahay in teknolojiyaddan aan weli si muuqata looga hirgelin deegaanka xirfadda leh, adeegsadayaasha Apple ayaa qiimeyn doona. Marka labaad, Waxaan sii wadnaa fursado badan oo aad u ballaaran, kuwa ugu fiican suuqa sida aan awooday inaan u fiirsado:
1x 3,5mm wax soo saarka dhagaha ee Jack
1x USB-B Upstream (loogu talagalay qalabka iyo PC)
4x USB 3.2 Downstream ee isku xirka duruufaha (waxaa ka mid ah BC 1.2 lacag degdeg ah)
Liiskan aan la soo koobi karin ee dekadaha ayaa noo oggolaan doona inaan sameyno HUBs la'aan haddii aan ka faa'iideysanno dekeddeeda USB-B, wax ka mid ah kormeerayaasha kale ee Philips waxaa lagu sameeyaa dekedda USB-C. Waxay u shaqaysaa furayaasha, jiirarka iyo waxyaabo kaloo badan, wax aniga ila fiican.
Dhanka HDR, waxaan nahay shahaado HDR400, waxaan ku xisaabtamaynaa inaanan lahayn iftiin weyn ama iftiin aag, sidaa darteed HDR waxay qabataa waxa ugu fiican. Waxay leedahay Gamut Midab Wide sidaa darteed midabada kala duwan ayaa aad ugu ballaaran meelaha mugdiga ah. Iftiimintu waa macquul waxayna guud ahaan na siisay natiijooyin wanaagsan.
Khibrad dhawaaq iyo warbaahin badan
Tani Philips Momentum 278M1R waxaa ku jira laba af-haye oo si buuxda isku-dhafan oo dab-damisyo leh awood lagu qiyaasay 5W mid walba. Xaqiiqdu waxay tahay iyada oo ku dhawaad ​​maqnaanshaha baska, ay na siiso khibrad ka sarreysa celceliska. Si kastaba ha noqotee, waxaan wali ku talinayaa sanqadha codka wanaagsan sida Sonos Beam oo ah shirkad wanaagsan aaladda noocan ah. Waxay maareeyaan inay buuxiyaan waayo -aragnimadeenna haddii aanan aad u dalban oo ay si fiican nooga saaraan jidka. Aragti ahaan, Waxay yihiin kuwa ku hadla DTS Sound la xaqiijiyay.
Marka laga hadlayo waayo -aragnimada adeegsadaha, waa inaan naftayda u sheegaa inaan ahay taageere cabbirka warshadda ee kormeerayaasha Philips, waxay umuuqataa mid dabiici ah oo dhinacyo badan leh. Waxaan ka faa'iideysanay astaamaheeda PlayStation 5 iyo si la mid ah ayaan ula shaqeyney Apple MacBook Pro, waxayna u buuxisay labadaba daabacaadda sawirka iyo ciyaarta fiidiyaha labadaba. Waxaan leenahay qaabab Smart-Sawirka oo leh jaangooyooyin loogu talagalay hawl kasta, iyo sidoo kale lagu daray farsamooyinka qaabka FlickerFree. Sida iska cad iyaga kaliya 4 ms imputlag (GtG) waxay noo oggolaadaan inaan ku raaxaysano toogashada iyo ciyaaraha kale ee fiidiyaha. Haa runtii, 60 Hz laga yaabee inay ka gaabiyeen ciyaartooyda ugu baahida badan.
Khibradda 22 RGB LED -yada gadaasha dambe ee Philips ku baabtiiso maadaama Ambiglow uu yahay mid cajiib ah, wuxuu abuuraa dareen aad u badan oo la dareemi karo, oo maxaad u dhihi la'dahay, waa wax fudud "madadaalo" xafiiskayaga / qolkayaga, dhammaantoodna aan lahayn barnaamij dibadeed .
Waxaan wajahaynaa kormeere aad u badan, ikhtiyaar wanaagsan u ah kuwa wax ku barta / ka shaqeeya isla goobta ay ku qaataan saacadaha madadaalada ah, waxay noo oggolaaneysaa inaan hagaajinno meelaha bannaan annaga oo aan lumin hal shaqo, oo leh shaabadda dammaanadda ee Philips. Qiimaha, qiyaastii 400 euro wuxuu kuxiran yahay meesha lagu iibiyo, oo si bilaash ah looga keeno Amazon.
Hawl -wadeenka 278M1R
Quruxsan, naqshad si fiican loo dhisay
Xulashada ballaaran ee dekadaha iyo isku xirnaanta
Adigoo adeegsanaya Ambiglow waxaad keydisaa xariiqa LED
Guddi aad u wanaagsan oo leh shaqooyin iyo goobo wanaagsan
Iyadoo aan lahayn USBC
Waxaan u xiisay xoogaa iftiin badan oo kala duwan oo qiimahan ah
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Philips Momentum 278M1R, falanqayn qoto dheer